Kani waa maqaal ku saabsan gitaarka. Sidoo kale fiiri Kaban.
nooc ka mida gitaarka
Heerka Codka Shanqadha
(laxanka caadiga ah ee gitaarka)
Gitaar (; ) waa qalab ka samaysay alwaax iyo xodhko kaasi oo sameeya shanqad muusig ah. Giitaarka Waxaa loo isticmaala in lagu qurxiyo heesaha, gabayada, maahmaahda iyo wixii la mid ah.
Gitaarka waxaa isticmaala kooxaha fanka iyo suugaanta, gaar ahaan waxaa loo garaacaa fanaaniinta. Inkasto gitaarka la isticmaalo Waxaa dhulka Soomaalida caan ku ah kabanka oo ah mid u sameeysan qaabka ubada (leh madax wareegsan iyo dabo dhuuban). Gitaarku wuxuu leeyahay 4 ilaa 16 xadhig midaasi oo ka duwan kabanka. Sidoo kale wuxuu leeyahay ugu yaraan hal dalool (qaarkood ilaa labo dalool) kuwaasi oo codka iyo shanqadhu ka soo baxdo.
Dunida maanta giitaarku wuxuu caan ka yahay dhamaan caalamka. Intaas Waxaa dheer, Waxaa jira nooc ku shaqeeya korontada, kaasi oo leh shanqadh awiod badan oo ka dhawaaq dheer Giitaarka caadiga ah iyo kabanka.
6 Xubnaha Gitaarka (Sawiro)
Si la mid ah luuqadaha kale, Af Soomaaligu wuxuu ereyga gitaar ka soo amaahdey luuqada Ingiriiska "guitar" kuwaasi oo laftoodu ka soo xigtay luuqada Latinka ereyga cithara.
Sida ugu badan gitaarka aan korontada lagu xidhin wuxuu leeyahay 6 xadhig, laakiin Waxaa jira qaar kale oo leh 4 xadhig ilaa 16 xadhig kuwaasi oo loo isticmaalo siyaabo kala duwan.
Marka dusha laga arkayo Waxaa la moodaa wax fudud oo qof walba garaaci karo, laakiin sida runta ah gitaarku wuxuu u baahan yahay xirfad, aqoon iyo gacan furnaan badan. Qofka gitaarka sida fiican u garaaca waxay ku qaadataa dhowr sano inuu si fiican ula qabsado, sababtoo ah marka ugu horeeysay wuxuu bahalku dhaawaca faraha.
Si ka duwan kabanka, gitaarku wuxuu leeyahay 6 xadhig kuwaasi oo samaysan nidaam kala sareeya, isla markaana dhawaqa ay sameeyaan kala duwan yahay. Xadhkaha sare ayaa ugu dhawaq weyn halka kuwa hoose ugu dhawaqa khafiifsan yihiin. Hadaba marka gitaarka la garaacayo Waxaa la isticmaala labada gacmood, mid waxaa lagu garaacaa xadhkaha halka gacanta kale oo lagu qabto qoorta gitaarka si loogu adkeeyo ama xoojiyo shanqadha ay faraha hore sameeynayaan.
Xubnaha Gitaarka (Sawiro)
The Guitar​—What Goes In Is What Comes Out
Instruments In Depth: The Guitar Archived Luuliyo 27, 2017 // Wayback Machine An online feature from Bloomingdale School of Music (October 2007)
Stalking the Oldest Six-String Guitar Archived May 7, 2012 // Wayback Machine
↑ Farmer, Henry George, Ayer Publishing, p. 137, ISBN 0-405-08496-X Maqan ama ebar |title= (caawin)
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Gitaar&oldid=229192"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 21 Jannaayo 2022, marka ee eheed 19:37.